Translate | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ဒီတခါတော့ ဘာသာပြန် Apk လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် မကြာခဏ နိုင်ငံခြားတွေ သွားလာ တတ်သူများ
အတွက် အင်မတန် အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ ၊ စကားပြော လိုက်တာနဲ့ ဘာသာပြန်ပေး နိုင်ပါတယ် ။
ဝန်ဆောင်မှု အသေးစိပ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ် လိုက်ပါနော် ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 21, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Translate
ဒီကောင်လေး ကတော့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို စကင်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ပေးမဲ့ ကောင်လေးပါ။
အင်္ဂလိပ် ကနေ ယူရို ဘာသာ ၆ မျိုးကို ပြန်ပေးနိုင်ပြီး ယူရိုမှ အင်္ဂလိပ် သို့ ရ မရ မသိသေးပါ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူ
များရှိ မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Requires AndroidAndroid 2.3.3 or hig
▼ play store ▼ ▼ 1mobile ▼ ▼ AppBrain ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, September 18, 2014 No comments:
ဒီကောင်လေး ကတော့ စာရိုက် ပျင်းသူများ အတွက် အင်မတန် အသုံးဝင်ပါတယ် ကိုယ်သိချင်တာကို ပြော
စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်မှာဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
A compact and easy to use translation.
• Voice Translate: Translate your voice, and read aloud the translate results.
• Translate conversation: the dialogue exchanges like two people.
• Simultaneous multi-language translate: admire the 72 kinds of different languages ​​to express!
It needs an internet connection;
You can adjust the settings in use.
Recording: accept your voice message;
SD card: store your translation data;
Network: access to online translation engine.
Afrikaans,Arabic,Czech,German,English,Spanish,French,Indonesian,Italian,Hebrew,Japanese,Korean,Latin,Malay,Dutch,Polish,Portuguese,Russian,Turkish,Chinese (Simplified),Chinese (Traditional)
Afrikaans,Arabic,Bosnian,Catalan,Czech,Danish,German,Greek,English,Esperanto,Spanish,Finnish,French,Hindi,Croatian,Haitian Creole,Hungarian,Armenian,Indonesian,Icelandic,Italian,Japanese,Korean,Latin,Latvian,Macedonian,Dutch,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Albanian,Serbian,Swedish,Swahili,Tamil,Thai,Turkish,Vietnamese,Chinese (Simplified),Chinese (Traditional)
▼ play store ▼ ▼ 1mobile ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 14, 2014 No comments:
Ace Translator 12.6.9.9 Final + Crack
ဒီကောင်လေး ကလည်း အားလုံး သိပြီးသားပါ။ ဘာသာစကားပေါင်း များစွာကို မိမိ အလိုရှိရာ translation လုပ်
ပေးနိုင်တဲ့ program တစ်ခုပါ။ 66 languages ကို ဘာသာပြန်ပေး နိုင်ပြီး ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေ ပါဝင်သလည်း ဆို
တာကိုတော့ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် Crack ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အင်စတော လုပ်နည်းကို ဒေါင်းလော့ဖိုင် ထဲမှာ အရင်ဖတ်ပါ။
Ace Translator -aprogram for translation of any texts from foreign languages ​​into Russian and back. New style interface Ace Translator. Superior translation mechanism ensuresahigh quality of translation updated thanks to linguistic algorithms although what they at one meter data.
Ace Translator program has the opportunity to work with more than sixty foreign languages ​​- this feature of the program is explained quite powerful database , which containsavast array of dictionaries and applications. Despite the large number of supported foreign languages, translator Ace Translator does not haveasignificant load on the computer and takes up little space on your hard disk.
Now with text-to-speech feature, and support for 66 languages.
- Use 7Zip or WinRAR to Extract
- Use Crack to Actiave
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 07, 2014 No comments:
Free Download Ace Translator 12.6.5.972 Full Version
Ace Translator 12.6.5.972 | 4.79 MB
· Romanian · Bulgarian
· Turkish · Hungarian
Download Link: Ace Translator 12.6.5.972 ( 4.79 MB )
ကဏ္ဍ Translate, ဘာသာပြန်
Ace Translator 11.5.2.906 Pre Activated + Final
Ace Translator ဆော့စ်ဝဲလ် လေးကတော့ နိုင်ငံပေါင်း 72 နိုင်ငံကို ဘာသာပြန် ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့စ်ဝဲလ်
တစ်ခုပါပဲ။ အခုဆိုရင် Version 11.5.2.906 ထွက်လာပါပြီ။ အရင်ထက် ပိုပြီးနိုင်ငံတွေပိုများလာပါတယ်။
အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး Windows XP / Vista /7/ 8 အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အင်စတောလုပ်ပြီး
The new version 11.5 supports 72 languages, and with text-to-speech (TTS) support for 45 languages, which makes it an ideal language learning app as well.
· French · Galician
· Maltese · Norwegian
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, March 25, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Dictionary, Translate
Android OS အသုံးပြုသူတွေ လက်နဲ့ စာရေးရုံဖြင့် ဘာသာပြန်နိုင်
Android OS အသုံးပြု သူတွေ လက်နဲ့ ကိုယ် သိချင်သော စာလုံးရေး ရုံဖြင့် ဘာသာပြန် သိနိင်ပြီ။
ဘာသာ စကားပေါင်း ၁၃ခုနဲ့ အထက် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အသုံးလိုလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသနဲ့ တောင်ဘက်ဆုံး အာရှနိင်ငံတွေကို
သွားလည်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆိုပါ App ဟာ အလွန်အသုံးဝင်နိင်ပါတယ်။
မကြာသေးမှီ ကလည်း ထို App ဟာ iOS upgrade တွေဆီသို့ ရောက်ရှိလာပြီ။ ဖြစ်ပြီး သူလည်း
ဘာသာစကား ၁၃ မျိုးနဲ့ အထက် ရရှိနိင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေဟာ အခုဆိုရင် ထို app ပေါ်မှာ အာရေဘစ်၊ ပါရှား၊ အိန္ဒိယ ဘာသာ စကားတွေလည်း ရေး
နိင်ပြီး မိုဂိုလီရမ်၊ ဆိုမာလီစာတွေကို ရေးန်ိင်လာ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဒူဘိုင်း၊ နယူဒေဟီတို့လို နိင်ငံတွေကို သွားလည်ပတ်ခဲ့ရင်လည်း အဆင်ပြေ
Ref&Credit-smart pro journal
ကဏ္ဍ Android, Google, Phone Application, Translate
Ace Translator 11 Pre Activated (2Mb) ဘာသာပြန်ဆော့စ်ဝဲလ်
Ace Translator ဆော့စ်ဝဲလ်လေး ကတော့ နိုင်ငံပေါင်း 72 နိုင်ငံကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့
ဆော့စ်ဝဲလ် တစ်ခုပါပဲ။ အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး Windows XP / Vista /7/ 8 အားလုံးမှာ
အင်စတောလုပ်ပြီး အသင့် သုံးရုံပါပဲ။
The new version 11 supports 72 languages, and with text-to-speech (TTS) support for 45 languages, which makes it an ideal language learning app as well.
★★Currently Ace Translator supports translations between following languages:
★★System Requirements: Windows XP / Vista /7/ 8
From: Pyae Phyo (MMiTD) by ရန်ကုန်သား
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, February 07, 2014 No comments:
Ace Translator 11.5.4.908 Full Version + Serial Key
Small size and convenient program.
Size: 2,57 Mb.
Download Ace Translator 11.5.4.908 Full Version + Serial Key
WORLD OF CRACKS by WORLD OF CRACKS
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, January 18, 2014 No comments:
ကွန်ပြူတာ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်း အချို့ (English to Chinese)
မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူများ အတွက် ကွန်ပြူတာ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်း အချို့ကို တရုတ်ဘာသာနဲ့ ကြည့်တတ်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ အသုံးများတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေဟာ တရုတ်ဆော့ဝဲလ်တွေ များတာကြောင့် အသုံးဝင်
reboot system now 重启系统
apply sdcard:update.zip 使用SD卡根目录的update.zip更新系统
wipe data/factory reset 清空data分区并恢复出厂设置
wipe cache partition 清空cache分区
install zip from sdcard 从SDcard选择文件更新系统
apply sdcard:update.zip 使用SD卡根目录的update.zip 更新系统
choose zip from sdcard 从SD卡选择zip格式升级包
toggle signature verification 切换签名验证
toggle script asserts 切换升级脚本检查
backup and restore 备份和恢复
Advanced Restore 高级恢复
mounts and storage 挂载和存储
mount /system 挂载/system分区（系统分区）
mount /data 挂载/data分区（数据分区）
mount /cache 挂载/cache分区（缓存分区）
mount /sd-ext 挂载/sd-ext分区（A2SD分区）
format boot 格式化内核分区
format system 格式化系统分区
format data 格式化数据分区
format cache 格式化缓存分区
format sdcard 格式化存储卡
format sd-ext 格式化内存卡SD
mount USB storage 挂载SD卡为U盘模式
Reboot Recovery 重启Recovery
Wipe Dalvik Cache 清空Dalvik缓存
Wipe Battery Stats 清空电池状态
Report Error 报告错误
Key Test 键位测试
Partition SD Card 对SD卡分区
Fix Permissions 修复权限
touch calibration 触屏校准
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, August 19, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Phone Application, Translate, ဘာသာပြန်
မိစံ ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက် မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ကူထိန်းဖို့ ရွာက အသက်(၆၅)နှစ်ကျော်အရွယ် မိခင်အိုကို အိမ်ခေါ်ထားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ ကလေးငယ်ကိုအစာကျွေးရင်းက ကလေးပါးစပ်အဟမှာ နီနီစွေးစွေးသွားဖုံးထဲကနေ အဖြူရောင် သွားပေါက်လေးတစ်ချောင်းကို မိစံတွေ့လိုက်မိတယ်။ သားရဲ့ သွားပေါက်လေးကိုတွေ့တော့ မိစံ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားပြီး မိခင်အိုကို အော်ခေါ်လိုက်တယ်။
"အမေ... အမေ .. သား သွားပေါက်ပြီး အမေ.."
မိစံဘယ်လိုခေါ်ခေါ် အမေပြန်ထူးသံမကြားခဲ့ဘူး။ အမေရှိရာကို သူလှည့်ကြည့်တော့ အမေဟာ မုန့်တစ်တုံးကိုကိုင်ပြီး ငေးစိုက်ကြည့်နေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။
ကဏ္ဍ Short-story, Translate
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Thursday, March 01, 2012 No comments:
တုံးအတဲ့မိန်းမ နဲ့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမ
from နိုင်းနိုင်း စနေ by နိုင်းနိုင်းစနေ
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, February 14, 2012 1 comment:
ကဏ္ဍ Knowledge, Translate